မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သည် မော်လမြိုင်မြို့တွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာ့အရှေ့တောင်၏ အကြီးဆုံး တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကို ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်များပြီးလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတိယမြောက် တည်ထောင်သော ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ထိုတက္ကသိုလ်သည် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့နှင့် သိပ္ပံဘွဲ့များ၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့များကို ချီးမြှင့်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ပေးနိုင်သော တက္ကသိုလ်အချို့သာရှိရာ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သည် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်။
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကို ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ လက်အောက်ခံ မော်လမြိုင် ဥပစာကောလိပ် အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ မော်လမြိုင်ကောလိပ်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းကို ဗိသုကာလက်ရာမြောက်လှသော ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန် ဘူတာကြီး အစရှိသော အထင်ကရအဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ရာတွင် လူသိများ ထင်ရှားလှသည့် မြန်မာ ဗိသုကာပညာရှင် စည်သူဦးတင် ကပုံစံထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မော်လမြိုင် ဥပစာကောလိပ်၏ ပထမဆုံးကျောင်းအုပ်ကြီး စာရေးဆရာ ကုသ ခေါ် ဦးတိုးအောင်
မော်လမြိုင် ဥပစာကောလိပ်၏ ပထမဆုံးကျောင်းအုပ်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူမှာ ၁၉၃၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ခေတ်စမ်းစာပေလှုပ်ရှားမှုတွင် ဆရာဇော်ဂျီ၊ သိပ္ပံမောင်ဝ၊ မင်းသုဝဏ်၊ မောင်ထင်၊ မောင်သုတ၊ ဧမောင် တို့နှင့်အတူ ရှေ့တန်းမှ မား⁠မားမတ်မတ် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူ စာရေးဆရာ ကုသ ခေါ် ဦးတိုးအောင်ဖြစ်သည်။
ကောလိပ်တည်ဆောက်ရန် မြေနေရာစတင်ရွေးချယ်စဉ်က လက်ရှိနေရာ၏ လှပသောရှုခင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သည်ကောလိပ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး မြေနေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကောလိပ်၏ တည်နေရာသည် မော်လမြိုင်မြို့လယ်ခေါင်၏ အရှေ့မြောက် (၄) မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းကို ၁၉၅၀ အစောပိုင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်က ကောလိပ်၏အရွယ်အစားမှာ ၄၁၇.၈၇ ဧကဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမော်လမြိုင် - တောင်ဝိုင်း၊ အဓိကလမ်းနှင့်မော်လမြိုင် - အမ်ရတ်လမ်းများဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ ထိုနေရာ၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ကောလိပ်နှင့်မိုင်ဝက်အကွာအဝေးတွင်တောင်ဝိုင်းဟုခေါ်သော တောင်တန်းတစ်ခုရှိသည်။ ကောလိပ်နှင့်မိုင်လေးပုံတစ်ပုံခန့်အကွာတွင် ဗြိတိသျှတော်ဝင်လေတပ်နှင့် အမေရိကန် ကျားပျံလေသရဲအဖွဲ့ တို့၏ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လေယာဉ်ကွင်း (ယခုမော်လမြိုင်လေဆိပ်) ရှိသည်။ ကောလိပ်ကို မတည်ဆောက်မှီက တောင်ဝိုင်းတောင်နှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်သည် ၁၉ ရာစုနှင့် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်း ကိုလိုနီခေတ်ကာလတွင် ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်သူအရာရှိများနှင့် ဒေသခံ အထက်တန်းလွှာလူတန်းစားများ၏ ပျော်ပွဲစားထွက်ရာစခန်းနှင့် ဒေသခံ တရုတ်အသိုင်းအဝိုင်း၏ ဥယျာဉ်များရှိရာ နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ခရစ်နှစ် ၁၈၃၆ ခုနှစ်က ဗြိတိသျှပိုင်အောက်မြန်မာပြည်၏မြို့တော် မော်လမြိုင်မြို့သို့ (ထိုစဉ်က အထက်မြန်မာပြည်တွင် ဘကြီးတော်(စစ်ကိုင်းမင်း) စိုးစံချိန်ဖြစ်သည်) ရောက်ခဲ့သော ၁၉ရာစု အမေရိကန်ခရီးသွားစာရေးဆရာ Howard Malcom ၏ ခရီးသွားမှတ်တမ်းများအဆိုအရ၊ မော်လမြိုင်တရုတ်အသိုင်းအဝိုင်းမှ အစောပိုင်းအခြေချနေထိုင်သူများသည် တောင်ဝိုင်းတောင်( တရုတ်ဘာသာဖြင့် လင်းဒင် ဟုခေါ်ဆို) နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် အနီးတဝိုက်တွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများ စိုက်ပျိုးကာ နေထိုင်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင် ဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် ၁၉၈၂ တွင် မော်လမြိုင် ဒီဂရီကောလိပ်၏ နည်းပညာဌါနသည် ကောလိပ်မှ သီးခြားခွဲထွက်ကာ အစိုးရနည်းပညာအင်စတီကျု (ယခု မော်လမြိုင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်) ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင် ဒီဂရီကောလိပ်မှ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဇီဝဓာတုဗေဒ ဘီအပ်စီ(BSc) -- --
အုပ်ချုပ်သူများ စာရင်း (၁၉၅၃ မှ ယခု)[ပြင်ဆင်ရန်]
ဒေါက်တာ ကိုကိုဦး - နျူကလီးယားဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရှင်၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး
↑ Li, Yi (2016). Revisiting the Nineteenth- century Marketplace, and the Chinese Community in Moulmein. Center for Burma Studies Northern Illinois University. p.73
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ https://www.myanmar-edu.org/mueucap-university-mawlamyine
↑ มข.ต้อนรับ Mawlamyine University จาก เมียนมา[လင့်ခ်သေ]
↑ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်။ 29 May 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မော်လမြိုင်_တက္ကသိုလ်&oldid=738542" မှ ရယူရန်
မွန်ပြည်နယ်ရှိ ကောလိပ်နှင့် တက္ကသိုလ်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၆:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။